I-China Slide Maze yokukhiqiza kanye neFektha | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Endaweni yokudlala, izingane zivame ukukhangwa yi-hormone yisilayidi, sibeka izinhlobo ezingaphezu kwe-10 zamaslayidi anemibala, acebile futhi ahlukahlukene, ngokuqamba nokwakha ubuhle besikhala enkundleni yokudlala, dala ipaki yesilayidi izingane ezingakhathali kokudlala, imikhiqizo ye-carnival yesilayidi yokuqamba kanye nomthelela wokubuka okunamandla, futhi yenza ipaki yakho yengqikithi yangaphakathi ibe yinto egxile kuyo idolobha.
I-Slide ihlala iyinto ekhangayo kakhulu yezingane endaweni yokudlala, imishini emide futhi ebamba iso ensimini ukuze yenze ukubukeka okuhle, izogxila ekunakekeleni, izingane zingakhohlwa ukulibala.
I-slide carnival yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi eziqinile, futhi izinto zokwakha kanye nokwakheka kuhambisana ngokuphelele namazinga okuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Ipaki lokuzijabulisa, inxanxathela yezitolo, izitolo ezinkulu, enkulisa, isikhungo sokunakekela izingane / i-kindergar, izindawo zokudlela, umphakathi, isibhedlela njll.
Ifilimu ejwayelekile ye-PP ngokotini ngaphakathi. Futhi amanye amathoyizi agcwele amabhokisi
I-CE, EN1176, umbiko we-TUV, ISO9001, ASTM1918, AS3533 ofanelekile
Yini umthengi okudingeka ayenze ngaphambi kokuba siqale ukuklama kwamahhala?
1.Uma kungekho izithiyo endaweni yokudlala, vele usinikeze ubude & nobubanzi & nokuphakama, indawo yokungena nokuphuma kwendawo yokudlala yanele.
2. Umthengi kufanele anikeze umdwebo we-CAD obonisa ubukhulu bendawo yokudlala, kumaka indawo nosayizi wezinsika, ukungena nokuphuma.
Ukudweba ngesandla okucacile kuyamukeleka.
3. Isidingo setimu yokudlala, izingqimba, nezakhi ngaphakathi uma kukhona.
Izinsuku ezingama-3-10 zomsebenzi ngoku-oda okujwayelekile
Esedlule: I-Submarine Theme-001
Olandelayo: Inkundla yokudlala yomjaho wangaphakathi